Aaway maal-galiyayaashii xashiishka ee arka mowjadda weyn ee xigta? Qiyaasta Qiyaasta Daawada • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Meelaha maalgashadayaasha cannabis u arkaan mawjada xiga ee soo socota? Qiyaasta qiyaasta saxda ah
Meelaha maalgashadayaasha cannabis u arkaan mawjada xiga ee soo socota? Qiyaasta qiyaasta saxda ah
albaabka daroogada 13 May 2019
maqaal by daroogada 13 May 2019
Haweenka iyo waayeelka waxay ku biirayaan dhaqdhaqaaqa xashiishadda, iyagoo siinaya fursado maalgashi oo cusub, sida ay sheegeen guddi maal-galiyayaal xashiishad ah oo lagu wareystay munaasabad ay soo qaban qaabisay shirkadda xudduudda ka gudubta ee DCM.
2 Waxyaabaha iyo hababka loogu talagalay dadka cusub ee cannabis iyo khibradaha
3 Tartanka ugu wayn?
4 Waxaa jira fursado aad u weyn oo ku saabsan dose yar yar
Waxay filayaan soo noolaynta dhammaan noocyada alaabooyinka taasoo sahlaysa in la isticmaalo qadar yar oo la xakameeyey oo THC ah, oo ah walaxda ugu muhiimsan ee nafsiga ah ee marijuana.
Isbeddelku maahan wax la yaab leh. Ugu dambeyntiina, haweenku waxay si sii kordheysa u arkaan xashiishadda inay tahay dariiq suurtagal ah oo looga baxo dhibaatada iyadoo aan la oran karin, dhibaatooyinka hunguriga subaxa dambe. Jirka haweenka waxaa saameeya khamri ka duwan kan ragga, sidoo kale sababtoo ah waxay soo saaraan wax ka yar enzme en gaar ah oo jabiyo aalkolada jirka. Waxay sidoo kale shaqeeyaan inbadan, waxbadan cabbaan, ooy yeeshaan dhaqso xanuun cirrhosis ah.
Marka loo eego Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Mareykanka, heerka dhimashada la xiriira ee 45 ilaa sanadka 64 ee u dhexeeya 2000 iyo 2015 ayaa ku kordhay wax ka yar boqolkiiba 57 marka la barbardhigo ragga, kuwaas oo dhimashadoodu ay sababtay cirrhosis ee beerka oo kordhay 21 boqolkiiba kor u kacay isla mudadaas.
Dhanka kale, xaaladda waayeelka sidoo kale waa la sii fahmayaa. Kuwo badan ayaa la nool raaxo-darro raagta, oo ay ku jiraan arthritis ama lafo-beel ama mararka qaarkood cudurro is-difaac ah oo sababi kara daal, xanuun wadajir ah iyo ka sii darran. Tiro sii kordheysa ayaa sidoo kale la qabatimay OxyContin iyo xanuun joojiyeyaasha kale waxayna raadinayaan waddo ay ku yareeyaan ku tiirsanaantooda daroogooyinkaan. Nasiib wanaagse, xashiishadda mar dambe looma arkin wax ceeb ah maadaama laga yaabo inay mar uun xaaraan ahayd. Si loo muujiyo: Afhayeenkii hore ee Aqalka Mareykanka - John Boehner - oo 70 sano soo ahaa ka hor Sharciyeynta marijuana waa - xagaagii hore, oo uu weheliyo guddoomiyihii hore ee Massachusetts, Bill Weld, wuxuu ku biiray guddiga ururka qaybinta xashiishadda ee Acreage Holdings. (Da'da: 73.)
Waxyaabaha iyo hababka loogu talagalay dadka cusub ee cannabis iyo khibradaha
Mid ka mid ah badeecadaha u ballan qaadaya kuwa ku cusub xashiishadda waayo-aragnimo xashiishad badan oo la saadaalin karo ayaa ah shirkad u-shaqeeysa uumiga oo laba sano jir ah oo la yiraahdo Calaamadee (oo ka yimid California, USA), oo hal-ku-dheggiisu yahay 'weynaanta ayaa la socota xakamaynta'. Shirkaddu waxay u ogolaataa dadka isticmaala uumi-saarkooda inay hagaajiyaan xaddiga milligaraam ee THC ee ay ka nuugaan dhexdhexaad dhexdhexaad ah 1 ilaa 2 milligaraam, ilaa 3 ilaa 4 milligram oo waxtar leh, halkii barar.
Maqalka (sidoo kale ka yimid California, USA), oo sameeya qalimaan, ayaa sidoo kale ka codsanaya isticmaaleyaasha cusub. Qalinkooda ayaa ruxruxaa markuu adeegsaduhu neefsado seddex ilbiriqsi, hab looga caawiyo qofkaas inuu miisaamo khibradiisa. Dosist wuxuu kaloo iibiyaa noocyo ay u sameysato qaab ay heli karaan isticmaaleyaasha cusub, oo ay ka mid tahay iibinta hal nooc oo si fudud loogu yaqaan 'Hurdo', iyo mid kale oo loo yaqaan 'Bliss'.
Meel kale oo koritaan ah waxay diiradda saareysaa noocyada suugaanta, ama alaabta lagu dhigo carrabka, sida tinwaynta cannabis, kuwaas oo noqonaya kuwo sii kordhaya ee dadka isticmaala xashiishka cusub, badanaa sababtoo ah qiyaasta THC waa sahlan tahay in la maareeyo. Qalabka iibka online ee xayawaanada cannabis Leaflink ayaa xitaa sheegtay in subling luuqadaha xashiishadda lagu shubo iyo waxyaabaha tincture, dhibcaha, kiniiniyada iyo strips ay ahaayeen qaybaha ugu dhaqsiyaha badan ee soo kordhaya ee alaabada xashiishka sanadkii la soo dhaafay.
Tartanka ugu wayn?
Laakiin waxaa laga yaabaa in fursadaha ugu weyn ee mustaqbalka ay ku jiraan waxa loogu yeero "cuntada", alaabada xashiishadda ee la cuni karo. Kuwaani weligood waa ay jireen laakiin si fudud ayaa loo suuqgeyn doonaa si ka duwan oo ka wanaagsan. Tusaale ahaan, shirkadda DCM waxay ku maalgelinaysaa $5 milyan nooc cusub oo cabitaan ah, kaas oo qorsheynaya inuu bilaabo iibinta tallaalada dhadhanka leh ee THC xagaagan taasoo u oggolaan doonta isticmaaleyaasha inay ogaadaan sida saxda ah inta milligram ee ay cunayaan - oo ay la socoto sida ay dareemi karaan iyo goorta .
Suuqa bartilmaameedka shirkaddu waa: dumarka aan daruuriga aheyn inay sigaar wada cabbaan, laakiin yaa ku mahadsan nasashada xeerarka, xayeysiinta iyo baakadaha xariifka ah - waxay noqdaan 'xiiso u leh canna'. Sida mid ka mid ah haweenka aasaasaha shirkadda, oo isna bilaabay tijaabinta xashiishadda lafteeda sanadkii hore.
Waxaa jira fursado aad u weyn oo ku saabsan dose yar yar
Waxaana jira fursado badan oo dheeri ah. Sida Karan Wadhera, oo ah maamule maamule ka ah Casa Verde Capital, uu sheegay intii lagu gudajiray dood cilmiyeedka, "Waxaa jira fursad weyn oo suuq ah oo loogu talagalay xashiishadda meelo badan, inkasta oo ay wersheduhu na tuseen in dadku runtii ka taxadaraan daroogada oo si sax ah loo qaato" .
Narbe Alexandrian, madaxweynaha shirkadda maalgashiga xashiishka ee Canopy Rivers, ayaa si adag u oggolaatay. Wuxuu yidhi hadaad eegto xogta macmiilka oo aad eegto "intenders" (taasi waa, kuwa aan hada isticmaalin xashiishad, laakiin way u furanyihiin), ama eeg "diidmada" (dad hore isku dayay laakiin lahaa khibrad xun) - xaaladahaas tani badanaa waxay la xiriirtaa qadar qaldan oo qalad isu beddelay.
Fursadda lagu iibiyo labada dhinac ee alaabada qiyaasta daawada lagu shubo waa "weyn tahay," ayuu yiri Alexandrian, isagoo soo jeedinaya in dadka badankood ay rabaan xakameyn dheeri ah markay suurtagal tahay.
Sidoo kale waa bartilmaameed furan, qadarin badan oo ka mid ah dukaamada tafaariiqleyda ah ee hadda haysta qaab la yaab leh oo wax loo iibiyo Sida uu u sharraxay, badiyaa waa kiiska maanta in dukaanku uu diiradda saarayo tirada milligram ee ay iibiso, halkii uu diiradda saari lahaa badeecooyinka iyo tayada lafteeda. "Tusaale ahaan, waxay ka fikirayaan iibinta 100 milligram cabitaan $ 10 iyo 50 miligram cabitaan $ 5" waxayna ku qasbayaan macmiilka inuu ogaado sida loo xakameeyo waxa la iibsanayo iyo sida loo qiyaaso. Taasi way isbadali doontaa mustaqbalka dhow, ayuu yiri.
Akhri maqaalka buuxa ee TechCrunch (EN, ilaha)
saamiyadaAmericamaalgelintacannabisCBDsaliid cbdmaaliyad ahaanmicrodosingTHCMaraykankacuntoAdduunka oo dhan
Kordhi cannabis gaar ah oo leh Weedcraft Inc.
Breda waxay codsaneysaa baaritaanka weedka
Waa maxay cannabichromene iyo halkee laga heli karaa ...
17 Oktoobar 2020
CBD waxay wax ku ool u leedahay daaweynta hergebka heroin
Luxembourg oo noqotay waddankii ugu horreeyay ee Yurub...